» होलीको टीसर्ट १ रुपैयाँमा !
होलीको टीसर्ट १ रुपैयाँमा !
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार २३:५३
मोबाइल एप रिचार्जरले होलीको अवसर पारेर रिचार्जरले १ रुपैंयामा होलीको टीसर्ट उपलब्ध गराउने भएको छ ।रङहरुको पर्व होलीलाई हर्षोल्लास बनाउनुका साथै आफ्नो ब्राण्ड प्रवद्र्धनका लागि होलीको थिमयुक्त टीसर्ट १ रुपैंयाँमा उपलब्ध गराउने अफर ल्याएको रिचार्जरले जनाएको छ ।
गुगल प्ले तथा एप्पलको एप स्टोरबाट रिचार्जर डाउनलोड गरी एकाउण्ट खोले पछि प्रयोगकर्ताले तत्कालै एक सय क्यास प्वाइन्ट पाउने छन् । रिचार्जरबाट जतिको मोबाइल रिचार्ज गर्यो त्यति नै क्यास प्वाईन्ट पाइने छ ।
क्यास प्वाईन्टलाई रिचार्जरबाट सामान खरिद गर्दा डिस्काउण्ट भौचरका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
रिचार्जर एपमा मेबाईल, ल्यापटप, टिभी , फ्रिज किस्ताबन्दिमा र टुर प्याकेज ब्राण्डेड सामानहरु सुपथ मुल्यमा किन्न सकिन्छ । काठमाण्डौ उत्पत्यका भित्र नाईट फुड एण्ड ड्रिंकस् सर्भिस बेलुकी ६ बजेदेखि बिहान साढे ३ बजे सम्म अर्डर गर्न सकिन्छ ।स्रोत: लोकपथ